SEENANIS SEERANNIS WAAN DALAGAMEN NAMNI KAMIYYUU NI GAAFFATAMA!! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsSEENANIS SEERANNIS WAAN DALAGAMEN NAMNI KAMIYYUU NI GAAFFATAMA!!
#Godina Arsii Lixaatti namoonni waggaa sadii dura gaafa hiriira guddichaa hidhaman murtoon dabaa irratti murtaa’uun mana sirreessaa jiru.
Namoonni Maqaan isaanii armaan gaditti argaman kunneen Godina Arsii Lixaatti Hagayya 6/2016 gaafa hiriira guddichaa qabamuun murtiin dabaa irratti murteeffamee daraaraa hangana hin jedhamneef saaxilamanii jiru. “Miseensa ABO ti” ittiin jechuun namoonni mootummaa waliin hojjetan maqaa namoota kanneenii dabarsanii kennuudhaan akka hidhaman taasisan. Hidhamtoonni kunneen yeroo ammaa Mana Sirreessaa Godina Arsii Lixaa jiru. Namoonni hidhaman kunneen fi murtiin dabaan isaan irratti darbe:
1. Aabbuu Sa’id Seetee (hidhaa waggaa 16 fi walakkaa)
2. Aabbishuu Woyyoo Bakaloo (waggaa 16 fi walakkaa)
3. Awwal Abdurqadir (waggaa 16 fi walakkaa)
4. Eda’oo Hambaa (waggaa 16 fi walakkaa)
5. Fiqaaduu Hajii Baffaa (waggaa 16 fi walakkaa)
6. Eda’oo Gammadii Gidaa (waggaa 16 fi walakkaa)
7. Kamaal Nagesssoo (waggaa 16 fi walakkaa)
8. Bullii Qumbii (waggaa 16 fi walakkaa)
9. Qaabatoo Juulaa (waggaa 18)
10. Amaaraa Mulgeetaa (waggaa 18)
11. Waataa Gammachuu (waggaa 18)
12. Gurree Usoo (waggaa 20)
13. Tibbeessoo Gurree (waggaa 18)
14. Waariyoo Useen (waggaa 18)
15. Jamaal Bu’ee (waggaa 18)
16. Fayisaa Amaloo (waggaa 18)
17. Maammee Hajii Qaasim (waggaa 20)
18. Obsaa Fayyisaa (waggaa 18)
19. Arbuu Tibbaa (waggaa 18)
20. Mashoo Waarituu (waggaa 18)
21. Jamiilaa Kurkuree (waggaa 10)
Namoonni kunneen haga sadarkaa Oromiyaatti ol iyyannoo dhiyeeffatanillee homaa furmaata argachuu hin dandeenye. Hidhamtoonni kun uummanni Oromoo sagalee isaaniif ta’ee mana hidhaa kanaa akka baafatu waamicha dhiyeeffataniiru.Oromia Qeerroo Media
WBOn waraana kaayyooti!! gidiraa fi roorro jibbaa falmaa hadhaawwa sirnaa cuqursaa gita bittaa fana gaggeessa jiruudha!
Wbo #DIRRAA FI #DIRREE isaaratti ayyaana abbaa oromootu tumsaa!! Shiira fi shiirri kamiyyuu kaayyoo fi akeeka wbo homtuu duubatti hin deebbisuu!
Wbo keessatti gantuu fi ayyaayyalattuun eessayyu hin geeasu,ayyaana abbaa oromootu qaba waan taahef!
Dogoggoora uumamen dhiyeenya kana wbon shiiran hubaanna dhabuun moora galuun rakkoo fi gidiira hammaa keessa jiru.
Dhiyeenya kana miseensa wbo kan tahe zooni lixaarra jaal #GAMMACHUU_BANTII kan jedhamuu harkaa keennate ture,yaa tahu maa gala miti,akeeka fi kaayyoo obboleessa isaa dhiyeenya kana biyyoottti dabaluun shiira gaggeessa jira.namni yeroo ammaa wajjiira #JIMMAA_HOORRO_DAMBII_DOLLOO jira! Innis yeroo ammaa kana bilbilaa gargaara fayyaadamuun ijjoolle wbo tokko tokkoo naanno #Garjeeda,#Qondaala,#Beegi qunnamaa jira.namni kun bilbilaa gara garaa fayyaadama jira,ammaaf bilbilaa kanaatti dhimmaa baha jira…0925808306…
Namni kun gochaa shiira ammaa gochaa jiru kanaarra of deebbisu baannan humna barbaaden yaa egamu kan butamuu qofa of argaa!
Qabsoon Bilisummaa Oromoo ammaan tana sadarkaa Murteessaa fi xiyyeeffannoo guddaa barbaadurra (turning point) gaheera jedheen amana. Bu’aalee qabsoo Oromoon hanga ammaatti of harka galfatee jiruun yoon madaalu,Qabsoon bilisummaa Oromoo gara bu’aa guddicha feenutti (Galma waliigala qabsichaa=BILISUMMAA) cehuuf riqicha(spring board) cimaa ijaarrateera jedheen yaada.Kanaaf Boqonnaan qabsoo bilisummaa Oromoo ammaan tana irra jiru Walakkaa Boqonnaa Xumuraa xumura boodaati jedheen yaada.
Boqonnaan xumura qabsichaa kun immoo yoomiyyuu caalaa gaggeessummaa cimaa akka barbaadu ifa gala.Gama kanaanis Oromoon dureessa waan ta’eef qabsoo xumura garbummaa kana injifannoon goolabee , Oromoon Hawwii isaa bara heedduu kan taate Biyya Oromiyaa ijaaratte bilisummaa dhugaa keessatti ayyaaneffatee firii ishee waliin dhandhamaa jiraachuu akka danda’u abdiin jiru guddaa dha.
Kanarraa ka’ee yoon madaalu,Qabsoo Bilisummaa Oromoo boqonnaa xumuraa irra jiru kana akkaataa fedhii fi hawwii sabni Oromoo qabuun akka goolabamuuf gaggeessummaa cimaa kennuun murteessaa akka tahee dha.Gaggeesummaan kunis kan nuti har’a lafaa kaanee beektotaa,Qeerroo,Qarree fi qabsaa’ota akkasumas uummata Oromoo barsiifnu /itti himnu/osoo hin taane sadarkuma yaadaatti kaafnee dhugaa jirtu gabbisuu qofaaf akka tahe hubachuun bayeessa.
Kanaaf, Qabsoo Bilisummaa Oromoo boqonnaa murteessaa kanarraan gahuu keessatti gaheen hundi qabu guddaa dha.Beekumsa,Dandeetii,umrii qabsoon,leecalloo fi meeshaaleen,ijaaramaa fi kkf Qabsoo bilisummaa Oromoo ittin gaggeesinee har’aan geenyerratti garaagarummaan (sadarkaan walcaaluu) jiraachuu ni mala.Boqonnaa xumuraa garuu murteessaa qabsichi ammaan tana irra gahee jiru keessattis dhimmoonni akka fakkeenyaatti ka’an kunniin gahee keenya murteessuun waan hafu miti.Dhimmoota kanniin immoo gara tokkotti fidanii sad.qabsoon Oromoo gaafatuun hojiirra oolchuu gaafata.Haala boqonnaalee darban keessatti jiran xiinxallee gahee tokkoon tokkoon Oromoo hanga sad.isaatti qabaachaa tureef gatii laachuu feesisa.Tarsiimoowwan qabsoo hanga ammaatti hojiirra oolanii fi bu’aalee qabsoo argaman akkasumas sochii ijaaramni Oromoo sadarkaa adda addaatti godhee humna gabroomsaa raasaa jiru maraaf beekamtii/gatii sabni qabu kennee gara galmaa fi mul’ata guddaa hafetti qabsicha ceesisuu kan danda’u gaggeessummaa waliinii mul’ataan dabaalamee hunda oromootaa tokkoomsu yoo tahee dha jedha..!